Hoteello jaban - Mashiinka baaritaanka hudheelada oo leh dhammaan dammaanadaha!
Kuwani raadinaya hudheel jaban meel adduunka ah? Thanks to degenaheena waad awoodaa hel hudheelka aad raadineyso qiimaha ugu jaban ee internetka iyo dhammaan dammaanadaha.
Hoteellada raqiiska ah ee raadinta
Iyada oo loo marayo mashiinka raadinta hoteelkii hore waad awoodi kartaa hel hudheelka aad u baahan tahay oo keydso mahadnaqa qiimaheena weyn. Isticmaalkeedu waa mid aad u fudud, waa inaad sheegtaa meesha aad ka dooneyso hoteelka, taariikhda soo galitaanka iyo bixitaanka hoteelka iyo tirada dadka iyo / ama qolalka aad u baahan tahay, ku dhufo badhanka raadinta waana taas. Halkaas ayuu mashiinkeena raadinta ka sameyn doonaa sixirka lagama maarmaanka u ah inuu kaa helo adiga QIIMAHA UGU FIICAN laga helo dhammaan internetka. Maxaa fudud?
Markaad ka fekereyso abaabulka fasax wanaagsan, waa inaad fiiro gaar ah u leedahay dhowr qodob si aad u fuliso. Mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn waa raadinta hoy. Dhexdeeda ayaan dooranay inaan eegno hoteello jaban. Sababtoo ah iyaga dhexdooda waxaad ka heli kartaa xaaladaha ugu fiican adigoon qarash gareeynin. Soo ogow wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad si fudud ugu heli karto hudheelkaas riyadaada ah! Haddii aad rabto inaad hesho qiimaha ugu fiican ee suurtogalka ah waa inaad heshaa halkan guji.
1 Hoteellada raqiiska ah ee raadinta
2 Faa'iidooyinka ballansashada hoteelada khadka tooska ah
3 Sida loo ballansado hoteelka khadka tooska ah
4 Raadi hudheelo jaban
5 Dib u eegista hudheelka
Faa'iidooyinka ballansashada hoteelada khadka tooska ah
Waad ku mahadsantahay xaqiiqda ah in internetka uu soo galay nolosheena, horeyba wuu ufududyahay. Sidaas aad u badan in loogu talagalay abaabulo safar, Mar dambe uma baahnid inaan ka dhaqaaqno fadhigeenna fadhiga. Waxaan iska ilaalin doonaa sugitaan dheer xafiis kasta oo safar ama taleefan ah. Laakiin kaliya ma awoodi doonno inaan waqtigaas badbaadino, laakiin sidoo kale waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku xisaabtano sicirka aadka u wanaagsan ee ku jira kan safarka khadka tooska ah. Waxaa jira bogag badan oo bixiya qiimo dhimis iyo faa iidooyin badan markii aad ka dalbaneyso hoteelada khadka tooska ah, maadaama aysan jirin kharashyo cayiman oo wakaaladuhu ka qaadaan.
QiimahaIyadoo baahi badan loo qabo, ayaa heshiisyada hoteelka iyaguna way ka da ’weyn yihiin. Intaa waxaa sii dheer, haddii aan si dhow u eegno, waxaan had iyo jeer dooneynaa inaan wax yar badbaadinno haddii aan ku sii ballaarinno hoteelka websaydhkiisa. Had iyo jeer waa lagugula talinayaa inaad raadiso boggaga hudheelka oo aad sameysid isbarbardhig fudud. Hel qiimaha ugu fiican HALKAN.
Raaxo: Sidaan soo sheegnay isku mid maahan inaan isku soo bandhigno a wakaaladda safarka intii aan fadhiisan lahayn gurigeenna. Halkaan waxaan ku heleynaa waqti badan intii suurtagal ah si aan si wanaagsan ugu dooran karno hoygeenna. Waad baari kartaa boggag internet oo kala duwan waxaadna sameyn kartaa isbarbardhig dhammaan noocyada hudheelada, faa'iidooyinkooda iyo khasaarahooda iyo ka hor intaadan cagta saarin.
Jiritaanka: Dhib malahan intee jeer ayaad sameysataa boos celin. Websaydhadu had iyo jeer waxay diyaar u yihiin inay aqbalaan, subaxdii ama haddii aad go'aansato habeenkii.
Xaqiijinta: Ilbiriqsiyo gudahood gudahood, waxaad horeyba uheli doontaa xaqiijinta boos celinta la sheegay. Taasi waa, ka xaqiijin deg deg ah waxay noqon doontaa amnigaaga ugu fiican. Iyada oo ay taasi jirto, ma sii jiri karaan qaladaad suurtagal ah, waa wax iska soo horjeedda. Waxaad qolkaaga ka caymis ku yeelan doontaa hudheelka la doortay.
Sida loo ballansado hoteelka khadka tooska ah
Hadda oo aan ognahay faa'iidooyinka weyn ee helitaanka hudheelada internetka, waxaan sii socon doonnaa hal tallaabo oo dheeraad ah. Ma taqaanaa sida loo ballansado hoteelka khadka tooska ah?. Sidoo kale waa qodob ka mid ah qodobbada ugu fudud ee aan sameyn karno iyadoo aan la helin dhibaatooyin waaweyn. Waxaan u baahanahay a hotel raadiyaha, oo aan ka heli doonno bogga. Waa foom fudud oo aan lagu weydiin doonin macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, laakiin meesha aad rabto inaad fasax u aado. Tan ka sokow, waxay sidoo kale kugu habboon tahay inaad doorato labada maalmood ee imaanshaha iyo bixitaanka. Marka tan la dhammeeyo, waxaan u dooran doonnaa qolka sida ay dadku qabaan.
Markii aan soo buuxinno macluumaadka u dhigma, waa inaan riixnaa batoonka "raadinta" waxayna naga tagi doontaa hudheelada oo dhan iyo sidoo kale xulashooyinka laga heli karo halka aan u socono. Haddii waqtigan aysan jirin Qolal bilaash ah, marwalba waad beddeli kartaa taariikhaha markale waxaadna hubin kartaa xulashooyinka cusub. Si la mid ah, liis leh dhowr hudheelo ayaa soo muuqan doona. Halkaas waxaad ku riixi kartaa mid kasta si aad u aragto xaaladiisa, sawirada qolalka, hareeraha, iwm.
Raadi hudheelo jaban
Markaan galno liiska hudheelada, waxaan heli doonnaa dalabyada ugufiican. Tani waa sababta oo ah ikhtiyaarrada ugu fiican ayaa had iyo jeer u muuqda inay safarka ka dhigayaan wax yar oo la awoodi karo. Waxaan marwalba u maleyneynaa in gorgortanku uusan ka muuqan doonin waddadeena, maxaa yeelay wax runta ka fog ma jiraan. Laga soo bilaabo weyn dalabyada dhammaan hudheelada loo dhan yahay ilaa nus guddiga ama quraac quraac ah.
Taariikho: Taariikhaha ayaa ah kuwa mararka qaar kordhin kara qiimaha hoteelka. Waan ognahay inay jiraan xilliyo sare oo iyaga dhexdooda ah, qiimuhu cirka isku shareerayo. Taasi waa sababta, illaa iyo inta aan awoodno, aan wax ka beddeli doonno maalmaha. Maahan isku mid in laga baxo Jimcaha marka laga tago galabnimada Khamiista.
Xaaladda juqraafiyeed: Iyadoo aan loo eegin meesha aan aadno, marwalba waa suurtagal in la doorto hoteelo aan badhtamaha u ahayn. Qaabkan, waxaan hubineynaa in sicirka sidoo kale gebi ahaanba ka duwanaan doono. Raadi ka mid ah hoyga u dhow saldhigyada, in kastoo ay xoogaa ka durugsan yihiin aagga weyn.
BuugyarahaIn kasta oo waxa ugu muuqda ay tahay in la sameeyo sii qabsashada kahor, mararka qaarkood macquul maahan. Boos celin hore waxay noqon kartaa keyd weyn. Dabcan, maanta, waxaan leenahay hudheelo qaarkood oo bixiya qiimo dhimis aad u weyn markii ay harsan yihiin qolal yar oo bilaash ah. Marwalba waa inaad noqotaa mid feejignaan badan!
Dib u eegista hudheelka
Markii aan ballan dhiganno, waxaan mar walba dooneynaa inaan ogaano haddii aan sameyneyno wax sax ah. Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee aan tan ugu haysanno, ayaa ah dib u eegista macaamiisha. In kasta oo ay aad u kala duwanaan doonaan, had iyo jeer way naga caawin karaan xoogaa yar si aan fikrad uga helno waxa aan heli doonno. Ugu horreyntii, fikradaha noocaas ah waxaa badanaa la socda lambar. Waxay noqon doontaa dhibcaha la siiyo adeegyada kala duwan ee hudheelku leeyahay.
Haddii aad leedahay wax ka badan 6, markaa waxaan ka hadli karnaa hudheelo aad u xiiso badan. Dabcan, waad markasta u oggolaan kartaa naftaada inay ku qaadaan kuwa qiime yar. Si fudud, waxaan kugula talineynaa inaad sifiican u aqriso faallooyin kasta si aad u ogaato dhibcahaas yar. Kuwa badan oo ka mid ah qiimeynta waad ogaan doontaa haddii ay leedahay nadiifin wanaagsan iyo raaxo. Adeegga iyo saaxiibtinimada iyo sidoo kale haddii buuqu ka mid yahay qodobada taban ama aaggu aanu ku habboonayn.
Sidoo kale waa muhiim in la fiiriyo waqtiga imaanshaha iyo soo dhaweynta. Had iyo jeer waa lagugula talinayaa in tani ay tahay 24 saacadood. Si la mid ah, waa inaan dayactirnaa dhammaan adeegyada ay na siiyaan. Sababtaas awgeed, iyo si looga fogaado wax lala yaabo, waxaa lagama maarmaan ah in wax walba si taxaddar leh loo akhriyo. In kasta oo laga dhigayo waxaas oo dhan kuwo raaxo leh, waxna kama jecla inay naga caawiyaan saameynta muuqaalka. Sawiradu sidoo kale waa kufiican yihiin taageerida faallooyinka waxayna na siinayaan fikrad ballaaran oo deegaanka ah.
Sida aan arki karno, dhammaan tacabiirayaasha, helitaanka heshiisyo hudheel iyo abaabulidda safarada khadka tooska ah waa ciyaarta carruurta. Xitaa haddii ay wax yar sii qaadato, had iyo jeer waxay noqon doontaa madadaalo weyn waana ognahay inaan ku jirno gacmo wanaagsan fasaxyo jaban lama ilaawi karo.